कतार विश्वकप तयारीमा ६७ जनाभन्दा बढी नेपाली कामदारको मृत्यु ! | khaltinews.com
कतार विश्वकप तयारीमा ६७ जनाभन्दा बढी नेपाली कामदारको मृत्यु !
काठमाडाै, ९ पुस । सन् २०२२ विश्वकप अगाडि नेपाली आप्रवासी कामदारहरूको मृत्यु अघिल्ला वर्षको भन्दा उच्चस्तरमा रहेकोले कतारले नयाँ स्तब्ध पार्ने तथ्यांकहरूको सामना गर्नुपरेको छ । विश्वकप सुरु हुन २ वर्ष मात्र बाँकी रहँदा कतारमा नेपाली ६७ जना आप्रवासीहरुको जुलाई १६ र नोभेम्बर १५ का बीचमा कोरोना भाइरस महामारीसँगै मृत्यु भएको स्पोर्ट्समेलले खुलासा गरेकाे छ ।
खाडी राज्यको दोस्रो सबैभन्दा ठूलो आप्रवासी समुदायमा काम गर्ने व्यक्तिहरुको ज्यान गएको आरोपमा सुधारको आश्वासनको बाबजुद मानव मृत्यु संख्या बढेकोले २०२१ जुलाईको मध्यसम्ममा मृत्यु संख्या १६० को हाराहारीका पुग्ने देखिन्छ । बैदेशिक रोजगार विभाग नेपालकाे जुलाई १६, २०१९ देखि जुलाई १५, २०२० सम्मको तथ्याङ्कमा १०४ जना कामदारको ज्यान गएको देखिन्छ ।
विभागको तथ्याङ्कमा कतारमा जारी गरिएको मृत्यु प्रमाणपत्रलाइ मुल आधारको रुपमा लिइन्छ । यस तथ्यांकमा सडक दुर्घटनाबाट हुने हानी समावेश हुँदैन । मानव अधिकार संगठन फेयर/स्क्वायरका निर्देशक निक म्याकगिहानले मृतकको बृद्धिलाई ’अक्षम्य’ को संज्ञा दिएका छन् ।
“कतारसँग आफ्ना कामदारको मृत्यु विवरण छ, तर उक्त विवरण सुरक्षित राख्न उसले गरिरहेको इन्कार क्षमायोग्य छैन । उसलाई यस समस्याको अवगत धेरै समय अघिदेखि भएको थियो । मृत्युमा राम्रोसँग कार्य गर्न नसक्नुले श्रम सुधारप्रतिको प्रतिवद्धतालाई गम्भीर प्रश्नको रूपमा खडा गर्दछ, जुन कागजमा राम्रो देखिन्छ तर अहिलेसम्म परीक्षण गरिएको छैन ।” म्याकगिहानले स्पोर्ट्समेललाइ भने ।
कतार विश्वकप स्टेडियम बनाउन नेपाली आप्रवासी कामदारहरूले मुख्य भूमिका छ । ’विश्वकप मजदुरहरू स्टेडियममा मात्र छन् भन्नु सही होइन,’ उनले भने, ’विगत आठ वर्षदेखि कतारमा ठूलो मात्रामा भइरहेको निर्माण प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा विश्वकपकै लागि भएको हो । सम्पूर्ण देश विश्वकपको लागि तयारी गर्न लागि परिरहेको छ । त्यहाँ सयौं हजारौं कामदारहरू छन्, जो देशलाई पूर्ण तयार गरी २०२२ तिर रूपान्तरण गर्नका लागि आएका छन् ।’
काठमाडौं एयरपोर्टबाट आफ्ना प्रियजनहरूलाई बाकसमा जम्मा गर्न दर्जनौं परिवारहरूले महिनौं कुर्नुपरेको थियो किनभने कोरोनाभाइस बन्दाबन्दीका कारण मार्च २२ देखि स्वदेश फिर्ताको तीन महिना रोकिएको थियो । नेपालको वैदेशिक रोजगार बोर्डका प्रवक्ता दीनबन्धु सुवेदीका अनुसार करिब २४ परिवारले आफ्ना प्रियजनहरूलाई कतारमा दाहसंस्कार गर्न अनुमति दिए ।
रुपचन्द्र रुम्बा एजुकेसन सिटि स्टेडियममा स्काफहोल्डरको काम गर्दथे, जुन स्टेडियम विश्वकपका लागि ४० हजार सिट क्षमतासहितको बनाइएको हो । २४ वर्षीय उनी आफ्नो ८ वर्षिय छोरा निरजको शिक्षा र घरमा भएको ऋण तिर्ने सोच बोकी ऋण काँढेर कतार आएका थिए ।
दुई महिनापछि निद्रामा हृदयघातको कारण रुम्बाको मृत्यु भयो । उनको अज्ञात मृत्यु ’प्राकृतिक कारणले मुटको धड्कनकाे विफलता’ का कारण भएको जनाइएको छ । उनकी २४ वर्षीया श्रीमती निर्मला पाख्रिनलाइ उनका श्रीमान रुपचन्द्रको मृत्यु भएको बताउन कम्पनीले सरुमा फोन गरेको थियो । फोन गरेदेखि उनको मृत्युको बारेमा कुनै अनुसन्धान नभएको दाबी निर्मलाको छ ।
उनले स्पोर्ट्समेललाई भनिन्, ’कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले मलाई उनको मृत्युको बारेमा जानकारी दिन बोलाएका थिए । त्यसपछि मैले उनीहरूबाट जानकारी पाएको छैन । उनको मृत्युको विवरणका बारेमा थोरै मात्र थाहा छ । यसले धेरै पीडा भएको छ । मलाई लाग्छ कि हामी वास्तवमै के भयो भनेर कहिले थाहा पाउँदैनौं ।’
खाडीका पूर्व अनुसन्धानकर्ता म्याकजीहानले अन्धकारमा छोडेको परिवारको संख्या ’हजारौंमा पुगेको’ दाबी गरे । उनले भने,’मेरो विचारमा यो अपमानजनक विश्वास छ कि यस्तो परिस्थितिमा एक जवान मानिस मर्नेछ । संसारको सबैभन्दा आकर्षक र हाई प्रोफाइल टूर्नामेन्टको लागि बनाइएको स्टेडियममा काम गर्ने एक जनाको परिवारलाई एक हजार ३ सय पाउण्डको प्रस्ताव छ । ऊ कसरी मर्‍यो, त्यहाँ लापरवाही सामेल छ कि छैन, भन्ने बारे कुनैपनि अनुसन्धान प्रस्ताव गरिएको छैन- यो भुक्तानी हो । ’
’यो एकदम भयावह हो,’ उनले थपे, ‘शरीर घर आउँछ र तिनीहरूलाइ प्रायः प्राकृतिक कारणहरूले मरेको बताउँछन् । शोक अकल्पनीय हुनुपर्दछ- यो कठोर छ । निस्सन्देह हजारौं परिवारहरू छन् (अन्धकारमा छाडेका) । कतारमा अव्यवस्थित (आप्रवासी) मृत्यु हजारौंमा दौडिरहेको छ । यसको मतलब यो होइन कि सबै मृत्युहरू तातो वा लापरवाहीका कारण हुन्, तर यसको मतलब यो हो कि उनीहरू कसरी मरे भन्ने बारेमा कुनै जवाफ छैन । ’
पाख्रिनले अझै पतिको मृत्युको लागि उचित क्षतिपूर्ति प्राप्त गरिसकेकी छैनन् र अझै सख्त संघर्ष गर्दै छिन् । उनले भनिन्, ‘कम्पनी भन्छ कि उनीहरूले पहिले नै मेरो श्रीमानले पाउनुपर्ने पैसा तिरेको छ । अहिलेसम्म कम्पनीले उसको बाँकी तलब मात्र जारी गरेको छ र उनको मृत्युको केही महिना पछि करिब २ लाख नेपाली रुपैयाँ ( एक हजार २ सय ७० पाउण्ड दिएको छ । यसबाहेक मेरो श्रीमानका सहकर्मीहरूले पनि मलाई ६८,००० नेपाली रुपैयाँ (४३४ पाउण्ढ) सहयोग गरे । ’
‘उनीहरू जर्बजस्ति गर्दैछन् कि मैले पाउनुपर्ने कुरा मैले पाइसकेकी छु । तर २ लाख नेपाली रुपैयाँ अरू कामदारहरूको परिवारले पाएको तुलनामा केही हैन । कम्पनीले मलाई मेरो श्रीमानबिना बीमामा बसेकोले कम रकम पाएको बताउँछ । मैले अझै आशा त्यागेको छैन। ’
पाख्रिनले आफ्नो घाटाको बारेमा पत्ता लगाएको तरिका अझै कच्चा छ । उनले भनिन् कि रुपचन्द्र नेपाल छाड्नभन्दा पहिले स्वस्थ रहेका थिए ।
’उहाँका साथीहरूले मलाई पहिले फोन गरे । उनीहरूले भने कि मेरो श्रीमानलाइ निद्रामा हृदयघात भएको थियो र अस्पताल लगिएको थियो तर उहाँकाे बाटोमै निधन भएकाे थियो, ’उनले बताइन्, ‘मैले यो विश्वास गर्न सकिनँ, जब यो मैले सुरुमा सुनेकी थिएँ । उहाँले हामीसँग केही घण्टाअघि फोनमा कुरा गर्नुभएको थियो । मैले आफैलाई सोधें, “कसरी अचानक यस्तो व्यक्ति मर्छ?“
२०२२ प्रतिस्पर्धाका लागि चार स्टेडियमहरू सम्पन्न भइसकेका छन् । चौथो अल रेयान स्टेडियम भने गत शनिबार राति प्रतिष्ठित कतार कप फाइनल पनि खेलाइएकाे थियो । साे खेलमा कतारका अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी र फिफाका अध्यक्ष जियानि इन्फान्टिनो ग्लिज्टी रंगशालाभित्र थिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन कन्फेडेरेसनले कतारमा दुई वर्षमा प्रतियोगिता सुरु हुनुअघि ४ हजार श्रमिकको मृत्यु हुने भविष्यवाणी गरेको छ । यसको जवाफमा कतारको सुपुर्दगी तथा वितरणसम्बन्धी सुप्रीम कमिटी (एससी) का प्रवक्ताले भने, ‘रुपचन्द्र रुम्बाका रोजगारदाताहरूले एससीलाई खबर गरे कि उनीहरूले रुपचन्द्रको अन्तिम तलब ३ हजार ३ सय ५७ कतारी रियाल (७ सय १२ पाउण्ड) नेपाली दूतावासमार्फत उनको परिवारलाई हस्तान्तरण गरे । कम्पनीले श्री रुम्बाको परिवारलाई ८,००० कतारी रियाल (१ हजार ६२५) को क्षतिपूर्ति प्रदान गर्‍यो । ’
’परिवारले नेपाली वैदेशिक रोजगार ऐनमार्फत १४ लाख नेपाली रुपैयाँ (९ हजार ४०० सय ) र नेपाली सरकारी श्रमिक कल्याण कोष मार्फत ७,००,००० नेपाली रुपैयाँ (४ हजार ३७६) प्राप्त गरे,’ उनले थपे, ’एससीले हाम्रा ठेकेदारहरूलाई हाम्रो श्रमिक कल्याण मापदण्डहरूअनुरूपको सुबिधा सुनिश्चित गर्दछ, जुन कतारको श्रम कानूनसँग मिल्दोजुल्दो छ’
एससीले मृत्युसँग सम्बन्धित कारकहरू पहिचान गर्न र उनीहरूलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भनेर अनुसन्धान गर्दछ । एससी हाम्रा परियोजनाहरूमा हुने सबै कार्य-सम्बन्धित हानि वा गैर-कार्य सम्बन्धित मृत्युको सम्बन्धमा पारदर्शी भएको छ, जुन हाम्रो वार्षिक रिपोर्टमा प्रत्येक घटनाको विवरण जारी गर्दछ ।’